Samsung na-ebupụta Galaxy S21 Ultra 5G ụwa niile | Gam akporosis
Samsung na-ewebata Galaxy S21 Ultra 5G na Edge Display na Nhọrọ S Pen
Samsung ka gosiputara Galaxy S21 ma n’etiti ha ihe a bu S21 Ultra 5G nke wetara ya kacha mma ọ nwere ugbu a iji kesaa ụlọ ọrụ South Korea. Iji gosipụta eziokwu na mbụ na enwere ike iji S Pen, mgbe niile dị ka nhọrọ nhọrọ.
Anyị na-egosipụta S Pen n'ihi na ọ bụ naanị nwere ike ịbụ ngọpụ kachasị mma maka ụfọdụ onye nwe ya Site na Nkọwa gara aga, ị nwere ike ị nweta ịnweta Galaxy S21 Ultra 5G a nke nwere 120hz na ihuenyo ya na sentimita 6,8 na 1.500 nits ka ọ bụrụ ọnụ ọnụ Samsung nwere nchapụta kachasị elu ruo taa.
1 Galaxy ọhụrụ
2 Ikwu okwu banyere igwefoto Galaxy S21 Ultra 5G
3 Akụkụ ndị ọzọ nke S21 Ultra 5G
4 Nka na ụzụ nkọwa nke Samsung Galaxy S21 Ultra
Ọ ka na-esiri anyị ike ịchọta mgbaghara ole na ole iji nwee ike ịgbanwe nke ọ bụla Samsung gara aga, ebe ọ bụ na Ọ na-adịwanye mgbagwoju anya mgbe anyị nwere Galaxy S10 ma ọ bụ Galaxy Note10 na ruo taa ka ha bụ igwe eji egwu egwu abụọ.
Anyị na-eme ka eziokwu ahụ pụta ìhè anyị nwere ike iji S Pen maka oge izizi jiri ụdị Galaxy, na na ihuenyo nke na-arịgo S21 Ultra bụ nke nwere nchapụta kachasị elu nke Samsung kwalitere taa.
La ihuenyo nwere 6,8 ″ WQHD + AMOLED nwere ume na 120hz (nke nwere ike ịgbanwe site na 10 ruo 120hz dabere na ọdịnaya sitere na ihuenyo) na ọnụ ọgụgụ dị elu na nchapụta ya na 1,500nits. Samsung na-ekwukwa na ọ meziwanye ọdịiche dị iche site na 50% tụnyere ụdị ndị ọzọ. Iji kpuchido ihuenyo ahụ anyị nwere mbipụta ọhụrụ nke Gorilla Glass na Victus na na anyị ahụworị ugbu a na Galaxy Note 20 Ultra.
Ọ ga-kwuru na nke a nlereanya bụ naanị otu n'ime nso nke na-ejigide ihuenyo ihu, yabụ ọ bụrụ na ụdịrị panel a mara gị ahụ, ị ​​ga-ewepụta obere akpa gị iji nweta nke kachasị ọnụ.
Ikwu okwu banyere igwefoto Galaxy S21 Ultra 5G
Can nwere ike ịhụ n'ụzọ zuru oke ọhụụ ọhụrụ nke azụ nke S21 Ultra 5G ebe nhazi quadruple nke lenses nwere isi 108MP, 12MP ultra-wide na ihe ga-abụ lenses abụọ raara nye telephoto. Abụọ ndị a ga-ekwe ka 3x na 10x nyocha anya ma jiri teknụzụ pixel abụọ kọwaa foto dị nkọ na mbugharị ngwanrọ 100x.
N'ezie, ma dịka o mere na afọ ndị na - adịbeghị anya, Galaxy ọhụrụ ọ bụla kwesiri ịbụ ọhụụ ọhụrụ n'ọhịa nke foto; oge a Samsung dokwuo anya na oghere 108MP bụ ihe kachasị mma inwe Galaxy nwere igwefoto kachasị mma ruo taa.
Agbanwewo ihe dị omimi nke igwefoto S21 Ultra 5G ruo ugboro atọ na nwere ike ijide vidiyo 4K na 60 FPS na anya ọ bụla nke ekwentị; anyị na-ekwudịkwa banyere igwefoto dị n’ihu.
E nwere ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ na S21 Ultra 5G igwefoto igwefoto ka anyị were Video Snap, na nke ahụ bụ maka nhicha foto ndị ọ na - ejide mgbe anyị na - edekọ na 8K. Ma site na ụzọ, anya ọ bụla na ekwentị a na-enye nkwado ndekọ ndekọ 4K.
Akụkụ ndị ọzọ nke S21 Ultra 5G
N'ime eriri afọ ya S21 Ultra nwere ya na processor Exynos 2100 ohuru (na-eche na Next elu nke nso na AMD GPU-efegharị efegharị) na anyị ga-enweta ebe a na Europe; mgbe n'akụkụ nke ọzọ nke ọdọ mmiri ọ ga-hụrụ na Qualcomm si Snapdragon 888.
Gburugburu batrị anyị nwekwara ụfọdụ n'ime ihe ngọpụ ndị ahụ iji gbanwee Galaxy S21 Ultra 5G a, na ọ bụ n'ihi na ọ ga-enwe ike ịgba 50% na 30 nkeji.
Anyị na-ekwu na ndị magburu onwe aga site Samsung ka incorporate n'ime a akara na ikike inweta S Pen Nke ahụ na-abịa na ngwaọrụ na ọrụ anyị maara site na Samsung's Note series. N'ezie, anyị nwere ike ichefu maka ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ nke dị na usoro Nkọwa.
Ihe ngosi ọzọ nwere njikọta dị ka Galaxy S21 Ultra bụ ama mbụ nwere Wi-Fi 6E maka nọgidenụ na-ọhụrụ na ụkpụrụ ikuku ikuku kachasị ọhụrụ ma nweta njikọ ruo ugboro 4 ngwa ngwa.
O nwekwara UWB sensor iji kpọghee ọnụ ụzọ ụgbọ ala ma ọ bụ ọbụna ikike ịchọ ihe furu efu site na SmartThings Find; ọ bụrụhaala na ha nwere UWB dị ka Galaxy Buds ma ọ bụ Galaxy Watch.
Nka na ụzụ nkọwa nke Samsung Galaxy S21 Ultra
RAM 12/16 GB LPDDR5
Ihuenyo 6.8 "Edge WQHD + Dynamic AMOLED 3200 x 1440 / 515ppi HDR10 + / nkwụnye ume nkwụnye ume 120Hz / Eye Comfort Shield
Nchekwa 128 256 ma ọ bụ 512GB
Igwefoto na-aga n'ihu 108MP n'obosara (f / 1.8 / OIS / PDAF) / 12MP ultra-wide (f / 2.2 / 120 ° FoV / DPAF) / 10MP telephoto 1 (f.2.4 / 3x optical OIS DPAF) / 10MP telephoto 2 (f / 4.9 / 10x ngwa anya / OIS / DPAF) / + AF laser sensor
Igwefoto ihu 40MP (f / 2.2 80 Celsius FoV PDAF)
Batrị 5.000mAh na ikuku ikuku na tụgharịa
software Otu Ui 3.0 na gam akporo 11
ndị ọzọ Igwe mkpịsị aka mkpịsị aka Ultrasonic IP68 stereo ọkà okwu Dolby Atmos
Akụkụ 75.6 x 165.1 x 8.9mm
Ibu ibu 229 grams
ahịa 1.249 (128GB) € 1.299 (256GB) na 1.429 512 (XNUMXGB)
Na Samsung Galaxy S21 Ultra anyị nwere nhọrọ atọ na nchekwa: 128GB, 256GB na 512GB. Nsọpụrụ ha ga-enwe ọnụahịa nke euro 1.249, 1.299 na 1.429. Enwere agba anọ ịhọrọ site na: Ghost Silver, Ghost Black, Ghost Titanium, Ghost Navy na Ghost Brown.
N'ime ụdị atọ ahụ ma eleghị anya nhọrọ kachasị mma bụ 256GB,, ebe ọ bụ na enweghi nnukwu ọdịiche na ọnụahịa ya na 128GB; Nchekwa n'ihi na enwere ike ịdekọ vidiyo nke ekwentị Samsung ọhụrụ a, ọ dị anyị ka ọ ga-adị ntakịrị.
Ị nwere ike mee nchekwa rue taa rue Jenụwarị 28 na Samsung online ụlọ ahịa. Maka ndoputa ị ga-enweta Galaxy Buds Pro na Galaxy SmartTag na ịzụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung na-ewebata Galaxy S21 Ultra 5G na Edge Display na Nhọrọ S Pen
Samsung na-ewepụta Galaxy S21 na S21 + yana ihu igwe ewepụghị na ọnụ ahịa dị oke oke
Samsung Galaxy A32 5G bụ etiti ọhụụ ọhụụ nwere ọnụ ahịa dị ọnụ ala